जसपामा भाडभैलो : यादव विरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने चेतावनी - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeसमाचारजसपामा भाडभैलो : यादव विरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने चेतावनी
जसपामा भाडभैलो : यादव विरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने चेतावनी
काठमाडौं । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिमण्डल गठनमा मनोमानी ढंगले मन्त्री छानेको भन्दै उनका कार्यकर्ताले विद्राेह गर्ने संकेत देखा परेकाे छ । जसपामा भाडभैलो सुरु भएको छ । पुत्लासमेत जलाएका छन् ।
मन्त्रिमण्डल गठनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रादेशीक, जातीय, समावेशीताकाे आधारलाइ बेवास्ता गर्दै मन्त्री पठाएर एकलौटी गरेपछि जसपामा भाडभैलो मच्चिएको हो ।
अध्यक्ष यादवप्रति दलका नेताहरु असन्तुष्टि जनाएका छन्। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद मो. इस्तीयाक राई, सांसद प्रदीप यादव,प्रमोद साह,अमृता अग्रहरी, मृगेन्द्र सिंहलगायत नेताले यादवविरुद्ध ठूलै कदम चाल्ने चेतावानी समेत दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताले अध्यक्ष यादवको पुत्ला समेत जलाएका छन् ।
सरकार गठनमा पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि भएको बताएका छन् ।सांसद राईले आफ्नो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकल, स्वाच्छाचारी निर्णय गरेको आरोप लगाए । डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा र अशोक राई पूर्व गएको मौकामा मन्त्री छनौट गरेको उनको आरोप छ । यो निर्णयले पार्टी आहात भएको छ, प्रदेश २, बागमती र लुम्बिनीबाट समावेशिताको आधारमा मन्त्री छनौट गर्ने जिम्मा तीन शीर्ष नेतालाई दिइएको हो। तर, यादवले एकलौटीरुपमा गरे, यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, उनले भने, ‘यो सच्याउनुपर्छ।’
हाल मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान) लगायतले जनकपुरबाट डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा सपा विभाजनकै लागि काठमाडौं ल्याएका थिए । तर व्यापक विरोधपछि त्यति बेला अध्यादेश फिर्ता भयो। एक्कासी उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी (सपा) र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व राष्ट्रिय जनता पाटी (राजपा) एकीकरण भएर जसपा बनेको थियो। तर, यो एकीकरण एक वर्षभन्दा बढी टिकेन ।
उता रिक्त उपसभामुख पद भने जसपाले पाउने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुख जसपालाई दिने सहमति जनाएको छ। जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले उपसभामुख जसपालाई दिने सहमति भएको जानकारी दिए। सरकारमा जसपाका ४ जना मन्त्री मात्रै दिँदा पार्टीमा बबाल भएको गुनासो यादवले गठबन्धनमा राखेपछि सभामुख दिएर थुमथुम्याउने प्रयास गरिएको छ।
Previous articleसरकारले आफ्नो शरीरलाई मेसिनको रूपमा लिएको भन्दै चीनियाँ महिला आक्रोशित
Next articleभारतको उत्तर प्रदेश सबै लामो रनवे , अन्तर्राष्ट्रियएयरपोर्टको मोदिले गरे उदघाटन